प्रेममा निकै बफादार हुन्छन् यी अक्षरबाट नाम आउने यु’वती, छोड्दैनन् पार्टनरका साथ – Jagaran Nepal
प्रेममा निकै बफादार हुन्छन् यी अक्षरबाट नाम आउने यु’वती, छोड्दैनन् पार्टनरका साथ
केही यु’वतीहरु यु’वकको अनुहार हेरेर नै प्रेममा पर्छन् भने कोही यु’वतीहरु भने सोच विचार गरेर मात्रै प्रेम गर्छन । प्रेमदेखि वि’वाहसम्म र भविष्य पनि सोचेर प्रेम गर्ने यु’वतीहरु आफैमा बौ’द्धिक हुन्छन् ।
उनीहरुलाई समझदार मानिन्छ तर, पहिला नजरमा नै प्रेममा पर्ने यु’वतीहरु कस्ता हुन्छन् होला रु उनीहरुको स्वभाव कस्तो हुन्छ ? र उनीहरुको प्रेम कति समयसम्म टिक्छ त ? आउनुहोस् जानौँ पहिलो नजरमा नै प्रेममा पर्ने यु’वतीहरुको बारेमा ।
A नामका यु’वती पहिलो अक्षर ब् हुने यु’वतीहरुको स्वाभाव इमोशनल हुन्छ । यिनीहरु कुनै यु’वकको अनुहार हेरेर नै प्रेममा पर्छन् । यस्ता यु’वतीहरु छिट्टै पार्टनरलाई विश्वास गर्छन् । ‘एक्स्ट्रा केयरिङ’ प्रकृतिका यस अक्षरवाली युवती जीवनभरी पार्टनरको साथ छोड्दैनन् ।
B नामका यु’वती यस अक्षरबाट नाम सुरु भएका यु’वती सं’वेदनशील हुन्छन् । र, छिट्टै प्रेममा पर्छन् । उनीहरु आफ्नो साथीको बानीको बारेमा सचेत हुन्छन् । आफूले आशा गरेजस्तो नभएमा बिना साथी रहन पनि स्वीकार गर्छन् ।
G नामका यु’वती यो अक्षरबाट नाम सुरु भएका युवती छिट्टै प्रेमको चक्करमा पर्छन् । पहिलो नजरमा नै प्रेममा पर्ने यस्ता यु’वतीहरु साँचो प्रेम गर्छन् । र जस्तो सुकै कठिन परिस्थितीमा पनि जीन्दगीभर साथ निभाउँछन् ।
M नामका यु’वती यो अक्षरबाट नाम सुरु भएका यु’वती दिलवाली हुन्छन् । जति छिट्टो प्रेममा पर्छन् । जो उनीहरुको जीवनमा आउँछन् उनीहरुलाई जीवनभरी साथ छोड्दैनन् ।
P नामका युवती प्रेम वि’वाहमा विश्वास गर्ने यस्ता यु’वतीहरु पनि छिट्टै प्रेममा पर्छन् । यिनीहरु आफ्नो पार्टनरलाई कहिल्यै धोका दिँदैनन् । यद्यपि, यिनीहरुले कहिल्यै साँचो प्रेम पाउँदैनन् ।
T नामका यु’वती यो अक्षरबाट नाम सुरु भएका यु’वती छिट्टै प्रेममा पर्छन् तर व्यक्त गर्नलाई हिच्किचाउँछन् । तर यिनीहरु आफ्नो प्रेम पाउनको लागि जे पनि गर्छन् । र जीन्दगीभर आफ्नो साथीको साथ छोड्दैनन् ।